Ukuzivocavoca okulula oku-7 kokulahla i-Chin ephindwe kabini - Ukomelela
Iiresiphi Izilwanyana Zasekhaya Iinto Zokuzilungisa Uxinzelelo Buza Ingcali Abahlobo Nosapho Celeb Jonga Diy Ukulungiswa Kwangoko Ukutya
Ukuzivocavoca okulula oku-7 kokulahla i-Chin ephindwe kabini
Ngaba iiselfie zakho zibamba la mafutha ongezelelweyo emihlathini? Ungakhathazeki, abantu abanobunzima bomzimba obusempilweni, nabo, ngamanye amaxesha baba nesilevu esiphindwe kabini. Nangona kunjalo, ukuba ungumlandeli womhlathi otyhidiweyo obukhali ngokwaneleyo ukusika, lixesha lokuzisa imithambo yobuso kwindlela yakho yesiqhelo.
Oonobangela beChin kabini
Oonobangela abaqhelekileyo besilevu esiphindwe kabini kubandakanya ukutyeba okungaphezulu, ukuma okungalunganga, ulusu oluguga, ufuzo okanye ulwakhiwo lobuso. Ngelixa ezinye zezi zizathu zingekho kulawulo lwethu, sinokufumana imithambo efanelekileyo yokunciphisa isilevu esiphindwe kabini. Nalu uluhlu lwezinto ezinokukunceda umelane nengxaki.
Gcina ubuso bakho bujonge phambili, kwaye uzame ukuhambisa umhlathi ongezantsi phambili nasemva ngelixa uphakamisa isilevu. Phinda amaxesha ali-10 weziphumo ezifanelekileyo.
Ukuzilolonga ubuso ngobuso
Lo msebenzi usebenza kwimisipha ejikeleze imilebe ephezulu, kwaye kuthintela ukugogeka. Ngelixa usenza lo msebenzi, vula umlomo wakho ngokubanzi kwaye ukhanyise iimpumlo zakho. Bamba esi sikhundla malunga nemizuzwana eli-10 ngaphambi kokuba usikhulule.
Ewe ufunda ilungelo! Ingavakala ihlekisa, kodwa ukuhlafuna itshungqa yenye yezona ndlela zilula zokunciphisa kunye nokulahla amanqatha angaphantsi kwesilevu. Ngelixa uhlafuna itshungama, ubuso kunye nezihlunu zesilevu zishukuma ngokuqhubekayo, esinceda ukunciphisa amafutha amaninzi. Yomeleza izihlunu zomhlathi ngelixa uphakamisa isilevu.
Ukugcina intloko yakho ithe nkqo, qengqa kwaye wolule ulwimi lwakho kangangoko empumlweni. Phinda inkqubo ngendlela efanayo, kwaye ubambe imizuzwana eli-10. Phinda emva kwekhefu lesibini le-10.
Ukukhupha ngokuqinisekileyo kubalulekile kwi-selfie, kodwa ukuyenza rhoqo njengenxalenye yeseshoni yakho yokuzilolonga kunokukunceda ulahle isilevu esiphindiweyo. Into ekufuneka uyenzile kukuncancisa izidlele zakho kwaye ubabambe kwimizuzwana engama-30. Thatha umoya kwaye uphinde umthambo amaxesha amane ukuya kwamahlanu. Ukuba ubuso beentlanzi bunzima kakhulu, sebenza nepout.
Hlala kwindawo eguqe ngamadolo emva kwemilenze (vajrasan) kwaye ubeke iintende zakho emathangeni akho. Gcina umqolo kunye nentloko ngqo, kwaye uncamathisele ulwimi ngaphandle. Yolula ulwimi kangangoko unakho kodwa ungaluhluzi kakhulu. Thatha umoya kwaye, ngelixa uphefumlela ngaphandle, gquma njengengonyama. Phindaphinda ezintlanu ukuya kwezintandathu ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Lo ngowona msebenzi ulula, kwaye wenza imimangaliso kwisilevu esiphindwe kabini. Hlala kwindawo entle kwaye ujonge ngqo ngaphambili. Beka iminwe kwindawo yentamo, kwaye ubethe ezantsi. Kwangelo xesha, jikisa intloko uye ngasemva, uze ugobe intamo ukuze ubambe isifuba esilevini. Phinda inkqubo kabini.
Funda kwakhona: #FitnessForSkincare: Ukuma kweYoga kwesikhumba esikhanyayo
Izigaba Ulwazi Kunye Nemfundo Gynaec Diy
Amanqaku Omfazi Ombane
ukuchitha ixesha nosapho
iincwadi zakudala wonke umntwana ofikisayo kufuneka azifunde
Iifilimu zothando zangoku hollywood
amayeza asekhaya okususa iinwele ebusweni
behleli imidlalo yabantu abadala